Sidee si ay u gudbiyaan iPhone Music inay Lugood leh Qiimeynta & Tirada Play
> Resource > Lugood > Sida loo Copy Qiimeynta iPhone Music & Play Tirada si Lugood
"IPhone ma hagaagsan play iyo dacwadood ratings dib ugu Lugood halka aan isticmaalo qalab dhinac saddexaad inay ka iPhone wareejiyo music in Lugood. Waxaan la yaaban ahay nin wax og noocan oo kale ah ee dhibaatada iyo xal. Ma doonayo in aan iska wax info songs, kuwaas oo inta iyaga ciyaaro on my PC. " -Mirabelle
Haddii aad sida user ee kor ku xusan kuwaas oo aan ka heli kartaa ratings heeso iyo ciyaaro dacwadood off iPhone in Lugood tahay, waxa aad soo celin doonaa dhibaatooyin ka qaar ka mid ah inay ku raaxaystaan ​​music labada on PC iyo iPhone. In this article, aan idinla wadaago hab sahlan oo nuqul ka music iPhone in Lugood leh ratings iyo play soo oogay. Akhri si aad u hesho xal.
Tallaabada 1. Download TunesGo
Wondershare TunesGo (Windows) waa qalab ah in aan u socoto si ay u isticmaalaan in ay heeso ka iPhone wareejiyo Lugood leh ratings music iyo ciyaaro dacwadood. Waa aalad xirfadeed kaas oo si gaar ah loogu talagalay dadka isticmaala si ay u gudbiyaan music dhexeeya qalab macruufka iyo PC. Sidaa daraadeed, halka dayanayaan in Lugood music, ratings music iyo play tirada waxa loo soo guuriyeen sidoo. Hadda waxa si buuxda u la jaan qaada dhow nidaamka oo dhan loo jecel yahay Windows ka hawlgala. eeg faahfaahinta halkan .
Tallaabada 2. Connect iPhone la PC
Isticmaal cable USB in iPhone yimaado leh in ay xirmaan iPhone la PC iyo abuurtaan TunesGo. Qalab iPhone Tani waxay ogaan doonaa iPhone iyo muujiyaan iPhone info uu furmo suuqa hoose sida shaashadda hoose.
Wondershare TunesGo taageeraa dhamaan noocyada iPhone socda ee macruufka 9, macruufka 8, macruufka 7, macruufka 5 iyo macruufka 6. Waxa kaliya ee waa in aad hubiso waa in aad ku rakiban Lugood on your computer hor inta aadan isticmaalin TunesGo. App iPhone waxa kaliya ee ka shaqeeya halka Lugood la geliyo.
Tallaabada 3. Transfer music ka iPhone in Lugood leh ratings iyo play dacwadood
Laga soo bilaabo dhanka bidix ee suuqa kala aasaasiga ah, waxaad ka arki kartaa "Media" item. Riix Media, oo uu furmo suuqa cusub, guji Music. Dooro music doonayo, oo guji dhoofinta in > dhoofinta in Lugood Library .
Marka music waxaa loo wareejiyey Lugood Library, ratings music iyo play dacwadood ayaa la koobiyeyn doonaa in Lugood Library sidoo. Haddii aad nuqul music si gal ah deegaanka on your computer, ka dibna waxaad waayi doonaa rating music iyo ciyaaro count.
Bal eeg, siday u fududahay in lagu wareejiyo music in Lugood Library la music rating iyo count play. Iyada oo sidan, waxa aad maamuli doonaa heeso aad ugu jecel yihiin ama ma-wax-u jecel si fudud oo ku haboon.